ICE MBR Xuubka Module ee Daaweynta Wasakhda Warshadaha ee Nidaamka Tayada Qaboojinta
Membrane Bioreactor (MBR) waa nooc ka mid ah tikniyoolajiyadda horumarsan ee la soo saaray illaa dhammaadkii qarnigii 20-aad taas oo xaqiiqsatay isku-darka hufan ee farsamada kala-soocidda xuubka iyo tikniyoolajiyadda bayoolojiga. Tikniyoolajiyadda kala-saarista xuubku waxay beddeleysaa hab-dhaqameed dhaqameed firfircoon iyo unugga shaandhada caadiga ah; Awoodeeda kala go 'xoog leh waxay ka dhigi kartaa jahwareerka SS inuu noqdo eber. Waqtiga haynta Haydarooliga (HRT) da'da dhoobada (SRT) waa gebi ahaanba lakala saaray; biyaha ka baxa waxay ku jiraan tayo wanaagsan oo xasilloon oo dib loo isticmaali doono iyada oo aan la helin daaweynta heerka saddexaad. Lahaanshaha biyaha dhaqaalaha iyo wax ku oolka leh oo leh nabadgelyo sare, baaxadda dalabka dib-u-warshadaynta biyaha wasakhda ah ayaa si ballaaran loo ballaariyay.
Wareegyada Wareegsan ee Wareegyada Qaboojinta Wareegtada / Qaboojiyaha Xirmooyinka Wareegga Uumiga
Hawada qalalan ee la qaboojiyey waxay ka soo galeysaa qufullada dhinac kasta ee munaaradda salka hoose, waxaana kor iyo hoos ugu duuduubaya xoogag ka soo baxa fallaaraha axial ee korka ku rakiban, iyadoo ka careysiineysa biyaha dhacaya (waxay ka yimaadeen nidaamka qaybinta biyaha) iyo kordhinta ku wareejinta kuleylka ee xaalad hawo kulul oo qoyan oo laga sii daayo munaaradda hawada. Inta lagu guda jiro howshan, qadar yar oo biyaha dib u wareegaya ah ayaa uumi baxa sababo la xiriira kuleylka qarsoon ee loo maro tuubada iyo darbiyada gariiradda, iyadoo ka saareysa kuleylka nidaamka. Qaabkan hawlgalka, waxqabadka uumi baxa awgeed hoos u dhig heerkulka biyaha ee ka tagaya iyo tamarta taageereyaasha oo la keydiyay.
Wareegyada Wareegsan ee Wareegsan ee Wareegtada Wareegga / Qaboojiyaha Xirmooyinka Wareegga Wareegga
Maaddaama ay tahay nooca qabyada ah ee qulqulka qulqulka qulqulka qulqulka qulqulka, dareeraha munaaradda (biyaha, saliidda ama propylene glycol) ayaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo qaboojin ku lifaaqan gariiradda oo aan si toos ah hawada u soo gaadhin. Qalabku wuxuu u adeegaa inuu ka sooco dareeraha geedi socodka hawada banaanka, isaga oo nadiif ka dhigaya isla markaana wasakheyn kara wareegga xiran. Bannaanka gariiradda, waxaa jira biyo ku buufinaya gariiradda oo ku milmaya hawada banaanka si ay uga soo saaraan hawo diirran taaradda qaboojinta illaa jawiga maaddaama qayb ka mid ah biyuhu uumi baxayaan. Biyaha qabow ee ka baxsan gariiradda dib ayaa loo wareejiyaa oo dib ayaa loo adeegsadaa: biyaha qabow ayaa loo wareejiyaa bilowga hawsha si ay u nuugaan kuleyl badan inta lagu jiro uumi baxa. Waxay kaa caawinaysaa in la ilaaliyo dheecaanka geedi socodka nadiifka ah kaas oo yarayn doona kharashka dayactirka iyo hawlgalka.
Dhismayaasha Qaboojinta ee Qabsashada leh oo Muuqaal ahaan Leh
The munaaradaha qaboojinta wareegga furan waa aalado isticmaalaya mabda 'dabiici ah: tirada ugu yar ee biyaha ayaa kuleylka kuleylka uumi baxa qasabka ah si ay u qaboojiso qalabka ku habboon.
Munaaradda qaboojinta wareegga wareegga waa kuleyliyaha kuleylka, kaas oo awood u siinaya in lagu qaboojiyo biyaha xiriir toos ah oo hawada ah.
Kala wareejinta kuleylka ee biyaha ilaa hawada waxaa lagu fuliyaa qeyb ahaan kuleylka macquulka ah, laakiin badanaa waxaa lagu wareejiyaa kuleylka qarsoon (uumi baxa qeyb ka mid ah biyaha hawada), taas oo ka dhigeysa inay suurtagal tahay in la gaaro heerkulka qaboojinta oo ka hooseeya heerkulka deegaanka.
Nidaamka Daawada Kiimikada ee ICE ee Daaweynta Biyaha ee Nidaamka Qaboojinta
Hawlgalka nidaamka qaboojinta wuxuu si toos ah u saameeyaa isku halaynta, waxtarka, iyo kharashka warshad kasta, hay'ad, ama geeddi-socodka warshadaha tamarta. La socodka iyo ilaalinta xakamaynta daxalka, dhigaalka, koritaanka microbial, iyo hawlgalka nidaamka ayaa lagama maarmaan u ah bixinta waxtarka guud ee Qiimaha Hawlgalka. Tallaabada ugu horreysa ee lagu gaarayo ugu yaraan waa xulashada barnaamijka daaweynta ee habboon iyo xaaladaha hawlgalka si loo yareeyo culeyska nidaamka.
ICE Nidaamka Jilcadaha Biyaha Warshadaha ee Qaboojinta Tower Source Water
Jilicsanaanta biyaha waa nidaam lagu nadiifiyo biyaha oo adeegsada tikniyoolajiyadda isweydaarsiga ion si looga saaro biyaha macdanta dabiiciga ah sida kaalshiyamka iyo magnesium si looga hortago inay ku sii bataan dhuumaha iyo qalabka. Nidaamka waxaa badanaa loo adeegsadaa goobaha ganacsiga iyo warshadaha si loo fududeeyo isticmaalka fudud loona kordhiyo cimriga qalabka wax ka qabashada biyaha.
ICE Nidaamka Sifeynta Cufan ee ICE ee Daaweynta Biyaha Wareegga Taawarrada
Qaybaha mas'uulka ka ah wasakhda dusha sare ee kuleylka ayaa ka yar 5 mikroon. ICE miirayaasha sare ee qaboojiyaha miiraha biyaha ayaa ka saaraya waxyaalahan aadka u wanaagsan si ay u bixiyaan faa'iidooyinka dhabta ah ee biyaha qaboojinta nadiifka ah.
ICE Nidaamka Osmosis-ka Dib-u-Celinta ee ICE ee Nidaamka Biyaha Qaboojinta
Reverse Osmosis / RO waa teknolojiyad loo adeegsado in looga saaro waxyaalaha adag ee wasakhda ah iyo wasakhda biyaha iyadoo la isticmaalayo xuubka RO-ga ah ee la marin karo oo u oggolaan kara marinka biyaha laakiin wuxuu ka tagayaa inta ugu badan ee walxaha adag ee la milmay iyo waxyaabaha kale ee sunta wata. Xuubabka RO waxay u baahan yihiin biyo si ay ugu hoos jiraan cadaadis sarreeya (ka weyn cadaadiska osmotic) si tan loo sameeyo